सिराक्युसबाट न्यूयोर्क सिटी जाने अघिल्लो दिन न्यूयोर्कमा रहदा बस्ने ठाउ“को टुङ्गो लगाउन सोच्न थालें । साथी आनन्दको याद आयो, जो त्यहा“ सवैभन्दा नजिकको मनले खाम्यो । एस.एम.एस. गरिहालें आनन्द सर भोली म न्यूयोर्क सिटी जादै छु । राती कामबाट ढिला फर्कने साथीले भोलिपल्ट विहानै रिप्लाई गरे – वेलकम टु न्यूयोर्क सिटी सर । ज्याक्सन हाइट तिर आएर टाइम पास गर्दै गर्नुस, म डिउटी सक्नासाथ ८–९ बजे त्यहा“ आउ“छु अनि कोठामा संगै जाउ“ला ।
मैले हुन्छ भने ।
सिराक्यूसमा त्यो विहान बाक्लो हिउ“ परेर बाटो र घरछेउ पार्किङ्ग गरेका कारहरु सेताम्मे भएका थिए । तापक्रम –१४ मा पुगेको थियो । ग्रे–हाउण्ड बसमा चलेको हिटरले पनि यात्रुलाई पुग्ने गरी तातो दिन सकेको थिएन, म लगायत सबै यात्रु वसभित्र काप्दै थियौं भने बस बाक्लो हिउ“मा सावधानी पूर्वक विस्तारै गुडिरहेको थियो ।
बाटोमा आनन्दको अर्को एस.एम.एस आयो, ओ, नवराज जी, हामी विद्यार्थी झै बसेका छौं, सिरक र डस्नाको अभाव छ, तपाईलाई असुविधा होलाकि राती के गर्ने होला ?
मैले रिप्लाई गरे – म होटल बुक गर्छु, नि त । ज्याक्सन हाइट तिर भेटेर संगै खाना खाउला गफ गरौला भैगो नि त † यस पटक मैले पनि स्लिपिङ्ग ब्याग ल्याइन, हुन्न ?
आनन्दले जवाफ फर्काए – स्लिपिङ्ग व्यागमा सुत्ने भए ज्याक्सन हाइटमा आएर स्पोर्ट अथोरिटीमा किन्नोस्नत । त्यहा“ अलि राम्रो सामान पाउ“छ । बस्न त संगै बसौं है ?
मैले ओके सर डन भन्दिए, च्याप्टर क्लोज भएको ठानेर । नेपाली साथीहरु संग बस्दा खानपिन, बसाई सवै मिल्ने ठानेर मैले सानो घन्चमन्च किन नसहने भनी आफैलाई प्रश्न गरें र त्यही अनुसार माइन्ड मेकअप गरें ।
वादलमा जहाज पसे जसरी बस लिङकन टनेलमा पस्यो अनि पोर्ट अथ्योरिटी टर्मिनलमा यात्रुलाई झा¥यो, आफ्नो सुटकेस तानेर ज्याक्सन हाइट जाने व्लु लाइन मध्येको ई लिएर ज्याक्सन हाइटमा पुगे र त्यहाँ रहेको नेपाली रेष्टुरेन्ट चौतारीमा खाना खाए“ अनि नजिकैका अरु हिमालयन याक, थकाली किचेन, फ्रेन्डस कर्नर, आदि रेष्टुरेन्टहरु रहेका गल्लिमा हिडें, नेपाली खाना लाई मुल परिकारका रुपमा विश्व भरिका मान्छेलाई बेचेका छन् यी ज्याक्सन हाइटका रेष्टुरेन्टहरुले । यो नेपाल प्रचार गर्ने एउटा थलो बनेको छ । अमेरिकामा रहेका थुप्रै नेपाली गायकहरु त्यहा“ रहेका नेपाली सम्म आफ्नो कला व्यक्त गर्ने माध्यमका रुपमा यिनै रेष्टुरेन्ट मन्च बनेका छन् ।
साथीलाई कुर्न पर्ने अरु ३–४ घण्टा थियो । नजिकै रहेको स्र्कपीयो नामको मेक्सिकन वार मा छिरें, बाहिर चिसो स्याठले कतै न कतै नछिरी सुखै दिएन ।
बेलुका भनेको समयमा साथी कामबाट फर्किए । डेरामा पुगियो । दुःख सुख सतियो । भोलिपल्ट पनि साथीको मै वित्यो अर्को रात । पर्सिपल्टको कुरा हो । साथी काम बाट फर्कन अर्की ३ घण्टा जति बाकी थियो । म किचेनमा चिया पिएर एक्लै बसिरहेको थिए“ दिनभरिको म्यानहाट्टन तिर डुलेर थाकेकोले ।
वर्ष ४५ जतिकी एक जना मङ्गोलियन अनुहार भएकी तर औषत उचाइ अलि बढी भएकी महिला देखा परिन । म तिर केही शंकाका आ“खाले हेरेपछि प्रश्न गरिन ।
आइ एम फ्रेण्ड अफ आनन्द ।
उनले अमिलो अनुहार बनाएर अर्को प्रश्न गरिन् ।
हु गेभ यु दिस किई टु इन्टर दिस हाउस ?
मैले साथी आनन्दसंग आफु २ रात देखि यहा“ बस्दै आएको र ऊ आफ्नो साथी भएको र उसैले यस कोठाको चावी दिएको बताए ।
मेरो सोझो कुराले उन्को भर्खरै टुसा पलाउन लागेको रिसको विरुवा ह्वात्तै बढ्यो । उनले आफ्ना कुरा दवाव र धम्कीको भाषामा राख्न थालिन – यो कोठा मैले आनन्द र उस्को साथी गोकुल लाई दिएको छु, उनीहरु बाहेक कसैलाई यस कोठाको चावि लिन अधिकार छैन र मलाई जानकारी नगराई उनीहरु बाहेक अरु यहा“ बस्दा यो नियमको उल्लंघन हुन्छ ।
पाउना बस्नको लागि सहरमा होटलको व्यवस्था छ, यो ठाउ“ पाउनाघर होइन आदि, भन्दै उनी झन चर्की कुरा गर्न थालिन् । यति सम्म भनिन् कि –
मिस्टर आई डोन्ट नो यु, हु नोज यु माइट वि थिफ ? आई क्यान राइट नाउ, कल पुलिस एण्ड गिभ यु टु देम । आई हाएभ द्याट राईट ।
अब अति नै भयो, उन्ले साथीको मा पाउनाको रुपमा बसेको मेरो बसाइलाई सानो तिनो अपराध नै गरे जसरी व्याख्या गर्न लागिन । तथानाम बोलिन, अब के गर्ने ? मैले भनें म यहा“ साथीको मा अन्तिम रात विताउदै छु । तर पनि म यहा“ रहेर उन्को सान्ती हराम हुन्छ भने अहिले नै होटल बुक गरेर त्यस घर छाडीदिइ उन्लाई सहयोग गर्ने कुरा सुनाए“ ।
उन्ले सोधिन, भोलि कहा“ जाने ?
मैले भने, वासिङटन डि.सी.
के छ प्रमाण ?
मैले मोवाइलमा रहेको मेगा वसको टिकट देखाइदिए“ ।
आनन्दको साथी हो या होइन भनेर आनन्दको फोन नम्बर बताउन भनिन् । मैले आनन्द भनेर मोवाइलमा सेभ गरेको नम्बर देखाइदिए“ ।
अब म आनन्दको साथी भएको र भोलि उक्त घर छाड्ने पक्का प्रमाण देखेपछि होटल बुक गर्न ल्यापटप खोल्न लागेको मलाई उन्ले आजको एक रात यहा“ बस्न सक्छौ भनिन् ।
यतिखेर आइपुग्दा उनीमा थोरै मात्रामा रिसको पारो घटेको अनुहारमा देखिन्थ्यो । उनी तातिरहदा पनि म सेलाईनै रहेको देखेर उनी अलिकति लाज मानेको जस्तो देखिन्थिन् । अनुहारमा थोरै प्रायश्चितको झलक पनि आइसकेको थियो । उन्ले १ रात बस्न सक्ने औपचारिक तालको बाडी छाडिन । यो बाडीमा उन्को उदार आकस जत्रो छाती भएको उन्को हाउभाउले नाटक गरेको भए पनि त्यो सा“चो थिएन । यो उन्को मुटु माथी ढुङ्गा राखि गरिएको निर्णय थियो ।
उन्लाई एक त उक्त घरमा म पाउना बनेर बसेको मन परेको थिएन भने अर्को साथीले उन्लाई बेलैमा पाउना पालेको सुचना नपठाएको कुराले पनि रिस जगाइरहेको थियो ।
उन्ले पाउना बसेको भन्दा पाउना बसाउनेले बेलैमा घरधनी संग एप्रोभल नलिएको कुरा तिर जोड दिन थालिन र म तिर केही नरम र उदार बनेको देखाउन थालिन ।
केही पहिले डेरावालले साथी ल्याउदा ट्वाइलेटमा ब्रस खसाएको, वाथटपमा धेरै पानी खर्च गरेको आदि कुराहरुले उन्लाई घाटा पु¥याएको कुराहरु सुनाउन थालिन । यी सबै भन्नुको औचित्य नया“ मान्छेहरु आउदा उनीहरुलाई घरका नियमहरु थाहा हुदैन र त्यसैले सम्पत्तिमा नै असर पु¥याउछ भन्नु थियो ।
मैले थोरै सहमतिको टाउको हल्लाइदिए“ ।
एकै छिन अघि अमानवीय ढङ्गले मलाई पुलिसमा सुम्पने सम्मको धाक लगाएकी यी महिला हल्का नरम बन्दै गइन, साथीको डेरामा २–३ रात बस्न आउदा पुलिसनै बोलाए पनि मेरो मानवअधिकारको अघि उन्को पुलिस प्रशासनले के जवाफ दिन्थ्यो त्यो अवश्य रोचक क्षण हुन्थ्यो होला । तर शान्त रह,ें कम बोलें, बढी बोलेर जित्न खोज्दा उन्लाई अझ बढी रिस उठ्न सक्थ्यो र परिस्थिति झन विग्रन सक्थ्यो । यस्को असर साथी आनन्दलाई पनि पर्न सक्थ्यो । हरेक ठाउमा आ–आफ्ना नियम र जिवनशैली हुन्छन ।
नाटकीय ढङ्गले परिस्थिति सौहाद्रपूर्ण बन्यो, विदेशी भुमिमा सा“झमा भेट भएकी एक महिला संग के शत्रुता पाल्नु र ? अब उनी घर निरीक्षण गरी बाहिर निस्किन् । व्यापारको रुपमा घर एकमुष्ठ भाडामा लिने र खुद्रामा कोठाहरु बेच्ने यी चिनिया महिलाकोे काम थियो । यो उन्ले सुरुमै मलाई हु आर यु भनेपछि मैले सोधेको उस्तै प्रश्नमा उन्ले ओनर अफ द हाउस भनेकी थिइन् । र सम्प्रभुता आफुमा निहित रहेको कुराको प्रमाण पनि देखाएकी थिइन् ।
मैले उन्लाई चिया अफर गरे, उनीले नो थ्याक्स, सेफ ट्रिप टु डि.सी. भन्दै घरबाट निस्किन मैले भर्खरै १ हप्ता काटेको २०१६ उन्को शान्त र उन्नत बनोस भन्दिए ।
पछि साथी आनन्द डेरामा आएपछि सडक नाटक झै अचानक आफूमाथि आइलागेको यो साझको घटना एक एक गरि बताए । साथीले मैले उक्त महिलालाई सौहाद्रपूर्ण व्यवहार गरी पठाएकोमा खुशी भए । उन्ले केही पहिले अर्को उन्कै छेउको डेरावालले कोठामा साथी ल्याउदा ति महिलाले विवाद बढ्दै गर्दा प्रहरी नै बोलाएको अनि घटनाले ठूलो रुप लिएको कुरा खोले ।
नेपाल देखि साथी भाई अमेरिका आउदा २–३ रात बास बस्न आफ्नोमा बोलाउनु साथी आनन्दको रहर र वाध्यता कुनै एक वा दुवै थियो होला ताकि उन्ले घरधनी संग पाउना पोलिसीमा के सम्झौता गरेका थिए, म यसमा अनविज्ञनै रहन चाहें । अनि पाउना प्रति घर÷कोठा भाडामा लगाउने एजेन्टहरु यति सम्म तल गिरेर व्यवहार गर्छन भन्ने मलाई कहिल्यै भान भएन । अतिथि देवो भवः भन्ने सस्कारमा हुर्किएको मलाई सबै भुगोलमा पाउना हाइहाई नभए पनि यति सम्म दुव्र्यवहार खेप्नुपर्ला भन्ने लाग्दैनथ्यो ।
त्यो साझले मलाई भिन्न सस्कृति र भुगोलमा यात्रा गर्दा पाउना बन्ने वा नबने कुराको छिनोफानो बेलैमा गर्न अब आउदा दिनहरुमा सहयोग पु¥याउने पक्का कोशेढुङ्गा बन्यो ।
न्युओर्क जस्ता अति महङ्गा र अरु सहरहरुमा यात्रा गर्दा पाउना बनेर साथी स्वयम र आफुलाई समस्यामा पार्नु भन्दा बरु आफ्नो वालेटका साइज अनुसारको होस्टेल, होटेल, गेस्टहाउस आदि को स्वव्यवस्था गर्न मलाई त्यो साझले झन उत्प्रेरित ग¥यो ।
अविस्मरणीय त्यो साझ एउटा सिकाइको समय बन्यो । ति महिलाले मलाई घरबाट निकालिनन् न त पुलिसनै बोलाईन तर चाहेको भए उन्ले त्यो नगर्न पनि सक्थिनन् । उन्ले जितेको र आफुले हारेको निसाफ गरें ।
हाम्रो समाजले सामान्य ठानेका कति कृयाकलापहरु अरु समाजमा असामान्य हुन्छन् अरु समाजले असामान्य ठानेका कति कृयाकलापहरु हाम्रो समाजमा सामान्य हुन्छन् । विश्व एउटै घर हो तर पनि अनगिन्ती समाजिक नीति नियम, शैली, सस्कारले यो चल्दै आएको छ । आफ्नो संस्कृति र सामाजिक अभ्यास मात्र उपल्लो ठान्नु भन्दा ठाउ अनुसारको भेषमा चलेको राम्रो होला ।
A simple and inltglieent point, well made. Thanks!